भारतीयहरुलाई न्यूजिल्यान्ड प्रवेशमा अस्थायी रोक
एजेन्सी । दक्षिण एसियाली देशबाट ठूलो संख्यामा नयाँ कोरोनाभाइरसका केशहरु बाहिर देखिएपछि न्यूजील्याण्डले आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न भारतबाट आउने सबै यात्रुहरूप्रति अस्थायी रूपमा प्रवेश रोक लगाएको छ।
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा थप ३३९ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । पीसीआर बिधिबार २९८ तथा एन्टिजेन बिधिबाट ४१ जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले प्रेस ब्रिफिङमार्फत दिएका हुन् ।
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा ४ जना कोरोनाभाइरसको संक्रमितको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थपिएका मृतकसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कूल संख्या ३ हजार ३६ पुगेको छ ।
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा थप २६६ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा थप १७६ जनामा कोरोना पुष्टि
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा थप १७६ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा थप १७९ जनामा कोरोना पुष्टि
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा थप १७९ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा थप १६२ जनामा कोरोना पुष्टि
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा थप १६२ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१६७ जना कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा थप १६७ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरोनाभाइरस चमेरोबाट मानिसमा अर्को जनावरमार्फत सरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार
बेइजिङ । विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस चमेरोबाट मानिसमा अर्को जनावरमार्फत सरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । चिनियाँ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को संयुक्त टोलीले गरेको अनुसन्धानमा कोरोनाभाइरस जनावरमार्फत मानिसमा सरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
नेपालमा थप १४१ जनामा कोरोना पुष्टि
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा थप १४१ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।